Rhabdomyosarcoma (ရာဘ်ဒိုမိုင်ရိုဆာကိုးမား) - Hello Sayarwon
Rhabdomyosarcoma (ရာဘ်ဒိုမိုင်ရိုဆာကိုးမား) ကဘာလဲ။
Rhabdomyosarcoma ဆိုသည်မှာ အလျင်အမြန် ကြီးထွားလွယ်သော ကင်ဆာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ခန္ဓါကိုယ် အနှံ့အပြားမှ တစ်ရှူးပျော့များ (ဥပမာ ကြွက်သား)တွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ စိတ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သော ကြွက်သား (လက်မောင်း၊ ခြေထောက်)တို့တွင် ဖြစ်တတ်၏။ ထိုကြွက်သားများကို အရိုးမှီကြွက်သား သို့မဟုတ် အစင်းပါကြွက်သားများဟုခေါ်ပါသည်။ Rhabdomyosarcoma အဖြစ်များသောနေရာများမှ ခေါင်း၊ လည်ပင်း၊ ဆီးအိမ်၊ မိန်းမကိုယ်၊ လက်၊ ခြေ နှင့် ခန္ဓါကိုယ်ထည်ပိုင်းတို့ဖြစ်သည်။ Rhabdomyosarcoma တွင် ကင်ဆာဆဲလ်များမှာ မရင့်ကျက်သေးသည့် ကြွက်သားဆဲလ်များနှင့်တူ၏။
Rhabdomyosarcoma အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပါသည်။
သန္ဓေသားဆိုင်ရာ Rhabdomyosarcoma – ၎င်းသည် အသက် ၆ နှစ်အောက် ကလေးများတွင် အဖြစ်များ၏။ ဦးခေါင်း၊ လည်ပင်းနှင့် အထူးသဖြင့် မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှ တစ်ရှူးပျော့များ (မျက်လုံးဆိုင်ရာ Rhabdomyosarcoma) တွင် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်သည့် တခြားနေရာများမှ ဆီးလိင်စနစ် အပိုင်းများဖြစ်သည့် သားအိမ်၊ မိန်းမကိုယ်၊ ဆီးအိမ် သို့မဟုတ် ဆီးကြိတ်တို့ဖြစ်သည်။
လေအိတ်ငယ်ဆိုင်ရာ Rhabdomyosarcoma – ပိုကြီးသောကလေးများနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဖြစ်တတ်သည်။ သန္ဓေသားဆိုင်ရာ Rhabdomyosarcoma ထက် ပိုဆိုးဝါး၏။ လက်၊ ခြေ၊ ရင်ဘတ်၊ ဝမ်းဗိုက်တို့တွင် အဖြစ်များသည်။
တတိယတစ်မျိုးဖြစ်သော Anaplastic Rhabdomyosarcoma မှာ အဖြစ်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကလေးများထက် လူကြီးများတွင် အဖြစ်များ၏။
Rhabdomyosarcoma (ရာဘ်ဒိုမိုင်ရိုဆာကိုးမား) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါသည် အဖြစ်များ၏။ ၎င်းသည် ကလေးများတွင် အနည်းငယ် ပိုဖြစ်နိုင်၏။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သော အချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Rhabdomyosarcoma (ရာဘ်ဒိုမိုင်ရိုဆာကိုးမား) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မျက်လုံး – မျက်ရည်ယိုခြင်း၊ မျက်လုံးအောင့်ခြင်း သို့မဟုတ် မျက်လုံးဖောင်းထွက်ခြင်း
နှာခေါင်းနှင့်လည်ချောင်း – နှာစေးခြင်း၊ နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်း၊ အသံပြောင်းခြင်း၊ အကျိအချွဲနှင့် ပြည်များပါသော နှာရည်များ ထွက်ခြင်း
ဆီးနှင့်လိင်လမ်းကြောင်း – ဗိုက်နာခြင်း၊ ဗိုက်တွင် စမ်းရနိုင်သည့်အလုံးပေါ်ခြင်း၊ ဆီးသွားရခက်ခြင်း၊ ဆီးသွားလျှင်သွေးပါခြင်း
ခြေလက်များ – လက်နှင့်ခြေတို့တွင် တင်းသည့် အလုံးများပေါ်ခြင်း။ လက်နှင့်ခြေတို့မှ ကင်ဆာများသည် အဆုတ်၊ ချဉ်ဆီနှင့် ပြန်ရည်ကျိတ်များဆီသို့ ပျံ့နှံ့လွယ်သည်။ များသောအားဖြင့် ထိုသို့ပျံ့နှံ့နေလျှင် လက္ခဏာမပြတတ်ပါ။
ခန္ဓါကိုယ်တွင် မပျောက်သွားသော အလုံးအကျိတ်များပေါ်နေခြင်း
ဆီးသွားရခက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝမ်းလျှောခြင်း
နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ မိန်းမကိုယ်နှင့် စအိုတို့မှ သွေးထွက်ခြင်း
Rhabdomyosarcoma (ရာဘ်ဒိုမိုင်ရိုဆာကိုးမား) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Rhabdomyosarcoma ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းကို တိတိကျကျမသိရပါ။ ဖြစ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်သိရန် သုတေသီများ ကြိုးစားနေကြပါသည်။
တစ်ရှူးပျော့ ဆာကိုမားကင်ဆာမှာ ယခင်တခြားကင်ဆာဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့် ကုသမှုခံယူပြီးနောက် ဖြစ်လာတတ်သည်။ ဆာကိုမားကင်ဆာသည် ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးပြီးနောက် အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်ကြာမှ ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ချို့သော ဓါတုပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မိခြင်းသည် တစ်ချို့ဆာကိုးမားများဖြစ်လာနိုင်ချေနှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုဓါတုပစ္စည်းများတွင် ပလက်စတစ်လုပ်ရာတွင်သုံးသော ဗနိုင်းကလိုရိုက်နှင့် ပေါင်းသတ်ဆေးတစ်ချို့နှင့် ဒိုင်အိုဇင်တို့ပါဝင်ပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Rhabdomyosarcoma (ရာဘ်ဒိုမိုင်ရိုဆာကိုးမား) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
တစ်ချို့သော မွေးရာပါအခြေအနေများသည် လူတစ်ဦး၏ Rhabdomyosarcoma ဖြစ်နိုင်ချေကို တိုးပွားစေပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် ဤကင်ဆာမျိုးနှင့် တခြားကင်ဆာမျိုးများကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် ဗီဇမူမမှန်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။
Rhabdomyosarcoma (ရာဘ်ဒိုမိုင်ရိုဆာကိုးမား) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အလုံးတစ်ခုကိုစမ်းမိပါက ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်၊ သို့မဟုတ် တစ်ခါတစ်လေ သံလိုက်ဓါတ်မှန် ရိုက်ရပါလိမ့်မည်။ ရောဂါအမည်တပ်ခြင်းကိုတော့ အလုံးမှအသားစယူကာ အဏှကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ရသည်။ တစ်ခါတစ်လေ အလုံးတစ်ခုလုံးကို ဖယ်ထုတ်ရသည်လည်းရှိ၏။
ကင်ဆာပျံ့မပျံ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် ရင်ဘတ် ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်၊ အရိုးဓါတ်မှန်မျာ ပြုလုပ်ရသလို၊ ချဉ်ဆီနမူနာယူပြီးစစ်ဆေးခြင်းများပါ ပြုလုပ်ရပါမည်။
ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်မှာ ခန္ဓါကိုယ်အတွင်း ကလီစာများကို 3D ပုံစံတည်ဆောက်ပေးသော ဓါတ်မှန်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မလုပ်ခင် ၄ နာရီအလိုလောက်မှ အစာမစား ရေမသောက်ရန် ညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။
ပုံရိပ်များ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရစေရန် ဆိုးဆေးထိုးခြင်း သောက်ခြင်းများပါ ပြုလုပ်ရနိုင်ပါသည်။
သံလိုက်ဓါတ်မှန်သည်လည်း ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်နှင့် တူသည်။ မတူသည်မှာ ၎င်းသည် ဓါတ်မှန်အစား သံလိုက်ကိုသုံးပြီး ကိုယ်ခန္ဓါကန့်လန့်ဖြတ်ပုံများကို တည်ဆောက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Rhabdomyosarcoma (ရာဘ်ဒိုမိုင်ရိုဆာကိုးမား) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုထုံးများတွင် ခွဲစိတ်ခြင်း၊ ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်းနှင့် တစ်ခါတစ်ရံ ဓါတ်ရောင်ခြည်ပြခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သည် အကျိတ်လုံးအား တတ်နိုင်သလောက် အကုန်ဖယ်ရှားပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့လုပ်ရာတွင်လည်း ခန္ဓါကိုယ်ပုံစံမပျက် မထိခိုက်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံးပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ထိုသို့လုပ်ရသည်မှာ အလွန်ခက်ခဲကြောင်း သိထားပါ။ တစ်ချို့ဖြစ်ရပ်များတွင် ဆရာဝန်မှ ခြေလက်တစ်ခုလုံး ဖယ်ပစ်လိုက်ရတာမျိုးလည်း ရှိပါသည်။ တစ်ချို့တွင်တော့ ခြေလက်ကို ဒီတိုင်းပြန်ရနိုင်တာမျိုးလည်းရှိ၏။
ကင်ဆာဆေးသွင်းကုထုံးမှာ ကင်ဆာဆဲလ်များကို သတ်ပေးသော ဆေးများကိုသုံးရခြင်းဖြစ်သည်။ vincristine, actinomycin D, cyclophosphamide, doxorubicin, ifosfamide, and etoposide) စသည်များကို ခွဲစိတ်ပြီးနောက် အမြဲလိုလိုပေးရ၏။ ၎င်းသည် အကျိတ်ဖယ်ပြီးနောက် ကျန်နေခဲ့နိုင်သည့် ကင်ဆာဆဲလ်များကို သတ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ထို့အတူ တခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင် ရှိနေနိုင်သော ကင်ဆာဆဲလ်အိတ်လေးများကိုပါ သတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးကိုတော့ များသောအားဖြင့် ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ကင်ဆာကျန်နေသေးလျှင် သို့မဟုတ် ကင်ဆာမှာ အန္တရာယ်များနေပြီဟုယူဆလျှင် ပေးလေ့ရှိပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Rhabdomyosarcomaကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
ဤရောဂါအတွက် ကာကွယ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိအချက်များ မရှိပါ။ ဤကင်ဆာမျိုးနှင့် တခြားကင်ဆာများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းရှိမရှိ မိသားစုဝင်များတွင် သိလိုပါက ဗီဇစစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert, R. K. (2009). The Merck manual home health handbook. Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Print version. page 1847